ပုလဲလက်ဘက်ရည်တံဆိပ် MXBC ကို စတင်တည်ထောင်ပြီး ၂၄ နှစ်အကြာမှာ ရေပန်းစားလာပြီး-ကြက်ကြော်က ဘာလဲ? - Pandaily
Jun 25, 2021, 17:13ညနေ 2021/06/25 20:01:02 Vivian Xu
“I Love You Me Love You Me, Mickey Choice & Tea” အမေရိကန် Doctor Oh Susanna! “ဆိုတဲ့ တီးလုံးထဲမှာ Ranglang ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို သီချင်းစာသားတချို့ ပါဝင်ပြီး ပုလဲလက်ဘက်ရည်တံဆိပ်ပါ mickey city (ခေါ်) MXBC ရဲ့ သီချင်း ၄ ပုဒ်ပါတဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဗီဒီယိုမျိုးစုံနဲ့ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ လှိုင်းတွေနဲ့ လှိုင်းတွေကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ vloggers တွေက ကင်မရာတွေကို ကောက်ပြီး လူတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နေရာသစ်ဆီ ရောက်လာကြပြီး ရိုက်ကူးရေးနေရာ – တရုတ်ပြည် မြို့တွင်း လမ်းတွေပေါ်မှာ MXBC Store – Furious တွေ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အများအားဖြင့် “ပုလဲလက်ဖက်ရည်” လို့ ခေါ်ကြတဲ့ MXBC ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ပုလဲလက်ဘက်ရည်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ မတူဘဲ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ MXBC ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး Henan Jung Zhengzhou မြို့ကနေ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး Low Line Market ကို အဓိကထားပြီး မြို့တွင်းသုံးလေးလိုင်းမှာ ဆိုင်ခွဲတွေ ဖွင့်လှစ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ customer တွေထဲမှာ အတော်လေးပါဝင်နေပြီး ကျောင်းသားနဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ သူတို့ဆီမှာ အရေးအကြီးဆုံးမရှိလို့ သည်အဘိုး အပေါ်ထိလွယ်ရှလွယ် ဆက်ဆံခံရပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Zhang Hong-sung က ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကို ဖန်တီးလိုက်ချိန်မှာ ကံကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ နည်းပါးသွားတာကို တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ Zhengzhou မြို့လေးကို ရေခဲခြစ်ရောင်းပြီး ပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက် Anhui မြို့ကြီးကို ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့ရာ-လူဦးရေထက် ပိုကြီးတဲ့ မြို့– အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရှာဖွေနေပါတယ်။ ဒါေပမယ့္ ဒီအစီအစဥ္ဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပဲ Zhang Zhengzhou ဟာ သူ႔ရဲ႕ေရခဲလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ MXBC အမှတ်တံဆိပ်ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မရေမတွက်နိုင်သော နေရာပြောင်းရွှေ့မှု အဖြစ်အပျက်များနှင့် အမှတ်တံဆိပ် ကူးပြောင်းရေး ကြိုးပမ်းမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက် နောက်ဆုံးတွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ရေခဲမုန့် ဝ.၃ ဒေါ်လာ (ဝ.၃ ဒေါ်လာ) ဖြင့် ဝ.၃ ဒေါ်လာ (ဝ.၃ ဒေါ်လာ) ဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်း ပထမဆုံး ကြယ်ပွင့်ထွက်ပစ္စည်း – မြန်မာ- မြန်မာ- မြန်မာ ဈေးကွက်အတွင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
စျေးနှုန်း တင်းကြပ်စွာ လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးသော (အများစုထက် စာလျှင်) ပြိုင်ဘက် MXBC သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရောင်းအား အကောင်းဆုံး ပုလဲလက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဖြစ်လာပြီး တနှစ်ဝင်ငွေ ၆၅ သန်း (၁၀ သန်း) ရှိသည့် မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အပါအဝင် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ဆိုင်ပေါင်း ၁ သန်းကျော် ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ခန့်မှန်းခြေ သန်း၂၀၀ အထိ တန်ကြေးရှိ ၎င်း၏ Hey tea and Nayuki Tea Tea သည် လူကြိုက်များ အရည်အသွေးမြင့် ပုလဲလက်ဘက်ရည်တံဆိပ်ကို ရိုက်ပုတ်ခဲ့သည်။
ဈေးနှုန်းကတော့ ယွမ် ၁၀ဝ ကျော် (၁.၅၅ ဒေါ်လာ) နီးပါး (Source: Pandaily)
ရေခဲမုန့် ဝဥလိပ် ၃ ယွမ် (ဝ.၄၆ ဒေါ်လာ) ၊ သံပုရာသီး ၄ ယွမ်၊ လက်ဖက်ရည် ၈ ယွမ်နဲ့ လက်ဖက်ရည် ဘယ်လောက်ဝင်ငွေရှိလဲ? အဓိက ကတော့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ဖူလုံဖို့ ကွင်းဆက်တွေ အပြည့်ရှိတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် MXBC က ၎င်းတို့၏ ဗဟိုချက်စက်ရုံကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သုတေသနနှင့် သုတေသနဌာနသည် အမာခံအစိတ်အပိုင်းအများစုကို ကိုယ်ပိုင် ထုတ်လုပ်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ကိုယ်ပိုင် Logistics Center ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ပထမဆုံး Zero Beverage Brand ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အလယ်အလတ် အမြတ်အစွန်းကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် MXBC က ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် အနိမ့်ဆုံး အဆင့်တွင် ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။
ကစားသမားအမ်ားစု ေနရာယူထားတဲ႔ေနရာမွာလည္း သူ႔ကိုယ္သူ ဒီလုပ္ငန္းကို မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ႔ပါဘူး။ Hey tea ရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ အတူ ပုလဲလက်ဘက်ရည်အမှတ်တံဆိပ်တွေကလည်း ဈေးကွက်နေရာတစ်နေရာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီး၊ MXBC ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သာမန်စားသုံးသူ အုပ်စုတွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့၊ သူတို့ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့နည်းဖို့၊ ထုပ်ပိုးမှုနဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေကို ပိုမိုဂရုစိုက်ကြမယ် လို့ တွက်ခြေကိုက်ပါတယ်။ ဒီအာမခံဟာ MXBC ရဲ့ အကြီးဆုံးဈေးကွက်နေရာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သလို အခြားအမှတ်တံဆိပ်တွေကိုလည်း သတိပြုမိစေခဲ့ပါ တယ်။ ဒီမော်ဒယ်က Theel Dogether ဖြစ်လို့ အမှတ်တံဆိပ်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ကြံ့ခိုင်အောင် ချဲ့နိုင်တာပါ။
မကြာသေးမီကမှ Red downs က MXBC ကနေ စတင်ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းတစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ privalize ပုံစံနဲ့ထုတ်တာဖြစ်ပြီး public မှာ ၂၅ စက္ကန့်သာတင်ထားတာဖြစ်ပေမယ့် တစ်လအတွင်းတင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေထဲမှာ Streaming Platform B ထက်သာလွန်တဲ့ ပမာဏကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တရုတ်မှာ ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၄ သန်းကျော်ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ “The Music Video” နှင့် စာသားများပါရှိသည့် MXBC ၏ ကုန်ပစ္စည်းအများစုကို စျေးပေါပေါနှင့် ကြိုက်နှစ်သက်ဟန်ရှိသော အမှတ်တံဆိပ် တခုဖြစ်သော “နှင်းဝမ် ” ဟု အမည်ပေးထားသည့် “နှင်းဝမ် – နှင်းဝမ် – အထူးပြု ကခုန်ခြင်းနှင့် သီဆို ကပြဖျော်ဖြေကြသည်။
ေတးဂီတဗီဒီယိုျပကြက္တစ္ခုသည္ “ႏွင္းဘုရင္” အမွတ္တံဆိပ္၏ ထူးျခားခ်က္ (Source: B Stand of the Mirror)
“ကျွန်မ အံ့အားသင့်မိတယ် ထင်တယ် MXBC က နောက်ဆုံးတော့ ပိုက်ဆံအလုံအလောက် ရပြီထင်တယ် သူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို” သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လှောင်ပြောင်တယ် “ဒါပေမယ့် နားထောင်ပြီးမှပဲ သူတို့အားလုံးသိမှာပေါ့” ဆိုပြီးတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီခ်င္းကို အသံုးျပဳသူ မရွိသေလာက္နည္းပါးေပမယ့္ အရည္အေသြးပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အကဲျဖတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ လူအမ်ားစုက ဒီသီခ်င္းကို လက္ခံလိုက္တာေၾကာင့္ သီခ်င္းကို လႈပ္ခါဖို႔ ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။ Brand တစ္ခုအတြက္ေရာ၊ အဲဒါေတြအားလံုးအတြက္ေရာ လိုအပ္တာေပါ့။
ဒီသီချင်းဗီဒီယိုဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အကြိမ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာရိုက်ကူးထားပြီး edit လုပ်ထားတဲ့ လက်ရာတွေထဲကမှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီး လူကြိုက်အများဆုံးကတော့ ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ သီချင်းခွေ ၂၀ ကို ဖြန့်ချိထားပါတယ်။ ထိုသို႔ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ နာမည္ေက်ာ္ “Kichiku ” ေခၚ အာရွယဥ္ေက်းမႈ လိႈင္းလံုးႀကီး မၾကာမီ ထြက္ရွိမည့္ ဗီဒီယိုႏွင့္ အသံပိုင္း အပိုင္းအစမ်ားကို ႐ိုက္ကူးရန္ စိတ္၀င္စားစရာ ဗီဒီယိုတစ္ခု ရိုက္ကူးရန္ ေၾကာ္ျငာတစ္ခု ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ Marketing Consultant ကုမၸဏီ တည္ေထာင္သူ ဟြာေမာင္ေလးမွာလည္း ယခုလို ေအာင္ျမင္မႈကို မေတာ္တဆ ရရွိခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။ ဆိုင်တော်တော်များများမှာ “အခမဲ့အချိုရည်တခွက်” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကြော်ငြာတွေရိုက်ကူးနေကြပြီး၊ ပွဲစီစဉ်သူတွေက ကောင်တာဘက်မှာ သီချင်းတပုဒ်ကို သီဆိုရင်း သံပုရာသီးတခွက်ကို အခမဲ့ရယူခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် MXBC ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းဟာ တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ သက်သက်မဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုလား? ကျနော်တို့ စမ်းသပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ နူးညံ့ပြီး လူကြိုက် အများဆုံး ပစ္စည်းတချို့လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပေမယ့်လည်း အချိုရည် ချိုလွန်းတာကြောင့် တချို့ လူလုပ်တွေ ချန်ထားခဲ့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ အံသြစရာ ကောင်းပါတယ်။
Customer တစ်ဦးကပြောပြပါတယ် “MXBC ရဲ့ နွားနို့ အချိုရည် နဲ့ ရေခဲမုန့် အရသာဟာ အသီးအနှံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ပိုကောင်းနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့ကြိုက်တဲ့ အသီးအနှံတွေက အခြားတံဆိပ်တွေနဲ့ မတူဘဲ လတ်ဆတ်မှု ရှိပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ် ။ “ဟေ့ကောင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရဲ့ အပြိုင်အဆိုင်တွေက သူ့ရဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ အရသာ၊ မကြာခနနူးညံ့ပြီး ဒိတ်ဒိတ်လုပ်ထားတဲ့ တံဆိပ်တွေကို အသိအမှတ်ပြုရပြီး MXBC က သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ “တချို့ပစ္စည်းတွေက ကောင်းတယ်”ဆိုတာမျိုးတွေအားလုံးကို ရိုက်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။